Dambudziko idzva reApple Watch, mangwana munhu wese kutamba | IPhone nhau
Apple haina kuvhura chinetso chitsva kune vashandisi veApple Watch kwenguva yakareba. Ino inguva idambudziko rinonakidza mune iyo kambani inoda kupemberera zuva repasirese rekutamba kuti iwe ugone kufungidzira Ndezvekutamba!
Kune avo vanofarira kuita iyi mhando yedambudziko iyo Apple inotsvaga nguva nenguva mune ino kesi China chinotevera, Kubvumbi 29, ndiko kuti, mangwana, International Dance Day inopembererwa Saka kuti ukunde kupokana, zvese zvaunofanirwa kuita kutamba kwemaminitsi makumi maviri uye nyora chiitiko pane yako Apple Watch.
Dhanho dambudziko rakagadzirira rinotevera Kubvumbi 29
Izvo zvinogara zvakanaka kuti Apple inotangisa matambudziko matsva kubva mune ino kesi Hatina kumbobvira tamboita dambudziko rekutamba paApple Watch kare. Kune vashandisi vazhinji vari kuenda kunakidzwa nedambudziko iri zvakanyanya uye tinovimba kuti Apple icharamba ichiwedzera nekuwedzera nekufamba kwenguva. Kana iwe ukaiwana, iwe unotora pamwe chete nemanamatiri muyero wakanaka wehutano, kutamba uye kunakidzwa.
Sezvatiri kutaura, dambudziko nderekutamba uye kuhwina mubairo watinofanira pedzisa kutamba kwemitambo kwemaminitsi makumi maviri kana kupfuura. Ini pachangu, ini handisi kunyanya kutamba uye kunyangwe ini ndisingade kubiridzira mune iyi pfungwa, kune iri dambudziko rekutamba uye pasina chero munhu achiziva kuti ndichaita rovedzo chaiyo uye ndichaiverenga sekunge kwaive kutamba ... asi shhhht!
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Dambudziko idzva reApple Watch, mangwana munhu wese kutamba